induction Pressure Vessels Heating System maka arịa na ogbe chernobyl
Home / ngwa / Itinye n'ọkwa Heating chernobyl / itinye n'ọkwa Pressure arịa Heating
Category: Itinye n'ọkwa Heating chernobyl Tags: ogbe arịa kpo oku, itinye n'ọkwa okpomoku, Itinye n'ọkwa okpomọkụ usoro arịa okpomọkụ, itinye n'ọkwa okpomọkụ, arịa ụgbọ mmiri, nrụgide arịa okpomọkụ, Pressure arịa Heating, Usoro arịa kpo oku, Ttọ ksgbọ mmiri tankị, Nchekwa kpo oku
Induction Pressure Vessels Heating-Batch Reactors-Nchekwa na idozi tankị na-egwu egwu
Gbọ mmiri na-eme ka mmiri kpoo ọkụ maka Reactors na Kettles, Autoclaves, Vessels Process, Nchekwa na Settọ tankị, athlọ mmiri, Vats na Iberibe ite, Vessels Pressure, Vapourisors na superheaters, Heat Exchangers, Rotary Drums, Pipes, Dual Fuel Heated Vessels and chemical arịa bụ ezigbo nkenke kpo oku. usoro dị maka nhazi mmiri ọ bụla.
Anyị nwere igwe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ site na 1 KW ~ 500KW. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ 0 ～ 650 C. Anyị nwere ike ịme igwe ọkụ ọkụ kwesịrị ekwesị maka ụdị dị iche iche.
Ihe nke induction kpo oku maka reacor kpo oku:
1. Ngwa ngwa kpo oku ọsọ na akwa kpo oku mmetụta
2. Enweghị kọntaktị anụ ahụ n'etiti eriri ntinye na mgbidi mgbidi dị ọkụ
3. Ibido ozugbo ma mechie; ọ dịghị thermal inertia
4. Obere ekpomoku
5. Nkenke ngwaahịa na arịa mgbidi okpomọkụ akara enweghị n'elu oge ịse
6. Ntinye ume dị elu, ezigbo maka njikwa ma ọ bụ micro-processor njikwa
7. Nchekwa odachi ebe ma ọ bụ ọkọlọtọ ulo oru ọrụ na akara voltaji
8. Mmetọ free edo kpo oku na elu arụmọrụ
9. Ego na-agba oso
10. Obere ma ọ bụ dị elu dị elu
11. Dị Mfe ma na-agbanwe agbanwe iji rụọ ọrụ
12. Opekempe mmezi
13. Agbanwe ngwaahịa oge niile
14. Heater na-onwe-ẹdude na kacha nta n'ala ohere chọrọ
15. Safty ma kwụsie ike maka awa 24 na-arụ ọrụ & Ihe karịrị afọ 10 na-arụ ọrụ ndụ
Ngwunye ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị iji dabaa n'ụgbọ mmiri na tankị nke ọtụtụ ụdị na ụdị ndị sitere na sentimita ole na ole ruo ọtụtụ mita dayameta ma ọ bụ ogologo. A na-eji ígwè dị nro, nke nchara nchara nchara, igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ nke na-abụghị nke nwere ike ikpo ọkụ. Ohaneze odi nkenke mgbidi nke 6 ~ 10mm ka akwadoro.
The igwe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ -agụnye:
1. ike itinye n'ọkwa kpo oku.
2. Ngwunye ikpo oku.
3. Gbasaa eriri
4. K ụdị thermocouple na na.
Ngwunye ọkụ na-enye uru ndị a na-ahụghị na sistemụ ndị ọzọ: arụmọrụ nrụpụta ihe ọkụkụ ka mma yana ọnọdụ ọrụ ka mma na enweghị nnukwu ikuku ọkụ na gburugburu.
Ọrụ ndị a na-ahụkarị na-eji usoro kpo oku:
• Reactors na kettles.
• Nrapado na mkpuchi pụrụ iche.
• Chemical, gas na mmanụ.
• Nhazi nri.
• Metallurgical na metal agwụ na na.
HLQ Nrụgide Vgbọ mmiri Hegbọ Ala Na-arụ Sistemụ Emeputa
Anyị enweela ihe karịrị afọ iri abụọ itinye n'ọkwa kpo oku ma mepụta, hazie, rụpụta, wụnye ma nyefee Vessel na Pipe Heating system na ọtụtụ mba ụwa niile. Ngwunye ọkụ na-etinye ihe niile dị mma nke ọkụ eletrik na-eduga na usoro ahụ ma gbanwee ka ọ kpoo ọkụ kpọmkwem ebe achọrọ ya. Enwere ike itinye ya n'ọrụ nke ọma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ arịa ma ọ bụ ọkpọkọ ọ bụla chọrọ isi iyi nke okpomọkụ.
Itinye ume na-enye ọtụtụ elele enweghị ike inweta site n'ụzọ ndị ọzọ ma na-enye mmịpụta ihe ọkụkụ ka mma yana ọnọdụ ịrụ ọrụ ka mma ebe ọ bụ na enweghị nnukwu mmịpụ nke okpomọkụ na gburugburu. Usoro a dabara adaba maka usoro mmeghachi omume nchịkwa dị ka mmepụta nke resin sịntetik na Mpaghara Mberede.
Dị ka onye ọ bụla Ngwunye kpo oku na-akpọ ndị ahịa ọ bụla mkpa na ihe achọrọ, anyị na-enye nha dịgasị iche na ọnụego ọkụ dị iche iche. Ndị injinia anyị enweela ọtụtụ afọ na ahụmịhe gbanwere induction sistem kpo oku maka ọtụtụ ngwa dị iche iche na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Emere ihe na-ekpo ọkụ ka o kwekọọ na ihe achọrọ maka usoro a ma wuo ya maka ngwa ngwa ngwa ngwa na arịa anyị ma ọ bụ na saịtị.
UFỌN ID UNBỌ
• Enweghị kọntaktị nkịtị n'etiti eriri mkpuchi na mgbidi mgbidi dị ọkụ.
• Mbido ọsọ ọsọ na mechie ọnụ. Enweghị ọkụ ọkụ.
• Obere okpomọkụ na-efu
• Nkenke ngwaahịa na arịa mgbidi okpomọkụ akara enweghị n'elu oge ịse.
• Ntinye ume dị elu. Ezigbo maka akpaka ma ọ bụ micro-processor njikwa
• Ebe nchekwa dị ize ndụ ma ọ bụ ọrụ ụlọ ọrụ ọkọlọtọ na volta akara.
• Mmetọ free edo kpo oku na elu arụmọrụ.
• runninggwọ ụgwọ dị ala.
• Obere ma ọ bụ nnukwu okpomọkụ na-arụ ọrụ.
• Dị Mfe ma na-agbanwe agbanwe iji rụọ ọrụ.
• Opekempe mmezi.
• Ogologo ngwaahịa dị mma.
• Okpomoku onwe ẹdude ke arịa na-amụba kacha nta n'ala ohere chọrọ.
Ngwunye ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị iji dabaa n'ụgbọ mmiri na tankị nke ọtụtụ ụdị na ụdị dị ugbu a. Site na ole na ole site na mita ole na ole ma ọ bụ ogologo. A na-eji ígwè dị nro, nchara nchara nchara, igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ arịa ndị na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike ịme nke ọma. Ohaneze odi nkenke mgbidi nke 6mm ka akwadoro.
Ebumnuche ọnụọgụ abụọ sitere na 1KW ruo 1500KW. Na sistemụ kpo oku enweghị oke ịgba na ntinye ike. Mmachi ọ bụla dị adị na-etinye ikike kachasị ike ọkụ nke ngwaahịa, usoro ma ọ bụ njirimara ọla nke arịa mgbidi.
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-etinye ihe niile dị mma nke ọkụ eletrik kpọmkwem na usoro ma gbanwee ka ọ kpoo ọkụ kpọmkwem ebe achọrọ ya. Ebe ọ bụ na kpo oku na-ewere ọnọdụ kpọmkwem na mgbidi arịa na kọntaktị na ngwaahịa ahụ na ọnwụ ọkụ dị oke ala, usoro ahụ na-arụ ọrụ nke ọma (ruo 90%).
Ngwunye ọkụ na-enye ọtụtụ uru ndị na-enweghị ike ịnweta site n'ụzọ ndị ọzọ ma na-enye mmụba nke mmepụta ihe ọkụkụ na ọnọdụ ọrụ ka mma ebe ọ bụ na enweghị nnukwu nsị nke okpomọkụ na gburugburu.
• Reactors na kettles
• Nrapado na mkpuchi pụrụ iche
• Chemical, gas na mmanụ
• Nhazi nri
• Igwe na ngwụcha igwe
• Preheating ịgbado ọkụ
• Ebu kpo oku
• Dabara Adaba & Ekwesighi
• Mgbakọ Kwesịrị Ekwesị
• Ihicha nri
• Ọkpụkpụ Mmiri Na-agba Ọkụ
• Tank & Arịa ụgbọ mmiri na mkpuchi
Enwere ike iji ndọtị HLQ In-Line Heater mee ihe maka ngwa gụnyere:
• Ikuku na Gas kpo oku maka Chemical na Nri nri
• Mmanụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ maka usoro na mmanụ oriri
• Ike na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ: raisingzụlite uzuoku ngwa ngwa, ọnọdụ dị ala na elu / nrụgide (ruo 800ºC na mmanya 100)
Gara aga ụgbọ mmiri na-aga n'ihu oru ngo gụnyere:
Ndị na-eme ihe na Kettles, Autoclaves, Vessels Processor, Nchekwa na Tantọ tankị, Blọ mmiri, Vats na Iberibe ite, Vessels Pressure, Vapourisors na superheaters, Heat Exchangers, Rotary Drums, Pipes, Dual Fuel Heated Vessels
Gara aga In-Line Heater project gụnyere:
Nnukwu ndị na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ dị elu, ndị na-ekpo ọkụ ikuku ikuku, ndị na-ekpo ọkụ mmanụ mmanụ, mmanụ na-eri nri na ndị na-ekpo ọkụ mmanụ mmanụ, Gas gas gụnyere Nitrogen, Nitrogen Argon na Catalytic Rich Gas (CRG).
Ugbo oku bụ a na-abụghị kọntaktị usoro nke bibiri kpo oku electrically-conductive ihe site n'itinye ihe ọzọ magnetik ubi iji mee ka eletrik, nke a maara dị ka ihe eddy ugbu a, na ihe onwunwe, nke a maara dị ka susceptor, si otú kpo oku na susceptor. Ejila ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ igwe maka ọtụtụ afọ maka ebumnuche nke ọla ọkụ, dịka agbaze, nụchaa, ọgwụgwọ ọkụ, ịgbado ọkụ, na ịgbado ọkụ. A na-eme ka ikpo oku na-ekpo ọkụ n'ọtụtụ dịgasị iche iche, site na ntanetị ike AC dị ala dị ka 50 Hz ruo na nke iri nke MHz.
Na oge ntinye ọ bụla, arụmọrụ kpo oku nke ubi nnabata na-abawanye mgbe ụzọ ụzọ ogologo dị na ihe. Nnukwu arụ ọrụ siri ike nwere ike iji obere ikuku mee ihe ọkụ, ebe obere ihe chọrọ ka ọ dị elu. Maka ihe a na-eme ka ọ dị ọkụ, obere oge na-enye ọkụ na-adịghị arụ ọrụ ebe ọ bụ na ume dị n'ọhịa ntinye anaghị emepụta ike ọkụ ọkụ nke ihe ahụ chọrọ. Ugboro oke, n’aka nke ọzọ, na-akpata kpo oku na-enweghị edo ebe ọ bụ na ike dị na mpaghara ntinye anaghị abanye n’ime ihe ahụ ma na-asọpụta mmiri dị egwu na ma ọ bụ n’akụkụ elu. Agbanyeghị, amabeghị ikpo ọkụ nke ihe eji arụ ọrụ na gas.
Usoro nka mbu maka mmeghari mmeghachi ihe nke gas na-achọ ka ihe nkpuchi ahụ nwee mpaghara dị elu ka ndị na-eme ka mmiri nwee ike inwe ezigbo kọntaktị na ngwugwu ahụ. Usoro usoro ihe eji eme ihe na-ejikarị ihe eji eme ihe ma ọ bụ ọtụtụ obere ihe na-eme ka ihe dị mma, kwadoro ya, iji nweta mpaghara achọrọ. Usoro nka ndị a na-adabere na nkwekọrịta, radieshon ma ọ bụ convection iji nye okpomọkụ dị mkpa maka ihe mmegharị ahụ. Iji nweta ezigbo nhọrọ nke mmeghachi omume kemịkal akụkụ niile nke ndị na-eme ihe ahụ kwesịrị ịnwe ọnọdụ edo edo na gburugburu ebe obibi. Maka mmeghachi omume na-ekpo ọkụ, ọnụọgụ nke nnyefe ọkụ ga-adị ka otu o kwere mee n'ogologo akwa akwa ahụ. Ntughari abuo, na ntughari, yana radieshon, enweghi ike ime ka ha nwee ike inye onu ogugu di nkpa na nhazi nke nnyefe oku.
GB Patent 2210286 (GB '286), nke a na-ahụkarị na nka izizi, na-akụzi na-arị elu obere ihe mmegharị nke anaghị arụ ọrụ eletrik na nkwado ọla ma ọ bụ doping ihe na-akpata ya iji nye ya eletrik. Nkwado ọla ma ọ bụ ihe na-eme ihe na-eme ka ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-eme ka ọ dị ọkụ. Ihe omuma a na-akuzi ihe eji eme ihe nke na-aga ebe ozo. Ihe kachasị mma maka isi ferromagnetic bụ ígwè silicon. Ọ bụ ezie na ọ bara uru maka mmeghachi omume ruru ihe ruru ogo 600, ngwa nke GB Patent 2210286 na-enwe oke mmachi na ogo dị elu. Mmetụta magnet nke ferromagnetic isi ga-agbada nke ukwuu na ogo dị elu. Dabere na Erickson, CJ, "Akwụkwọ ntuziaka nke ikpo ọkụ maka ụlọ ọrụ", pp 84-85, njupụta nke magnet nke ígwè na-amalite ịdalata na 600 C ma gafee 750 C. Ebe ọ bụ na, na nhazi nke GB '286, magnet ubi nke ihe ndozi na-adabere na njupụta magnet nke isi ferromagnetic, nhazi dị otú a agaghị eme ka ihe ọkụkụ dị ọkụ na okpomọkụ karịa 750 C, ma hapụ naanị iru ihe karịrị 1000 C chọrọ maka mmepụta nke HCN.
Ngwa nke GB Patent 2210286 kwenyere na kemịkalụ ekwesighi maka nkwadebe nke HCN. A na-eme HCN site na mmeghachi omume nke amonia na gas hydrocarbon. A maara na ígwè na-akpata nrụrụ nke amonia na okpomọkụ dị elu. Ekwenyere na ígwè dị na ferromagnetic isi na nkwado na nkwado n'ime ụlọ mmeghachi omume nke GB '286 ga-eme ka emebi nke amonia ahụ ma gbochie, kama ịkwalite, mmeghachi omume nke amonia chọrọ na hydrocarbon iji mepụta HCN.
Hydrogen cyanide (HCN) bụ kemịkalụ kemịkalụ dị mkpa nke nwere ọtụtụ ojiji na ụlọ ọrụ kemịkal na igwu ala. Dịka ọmụmaatụ, HCN bụ akụrụngwa maka imepụta adiponitrile, acetone cyanohydrin, sodium cyanide, na ndị na-etinye aka na imepụta ọgwụ anwụrụ ọkụ, ngwaahịa ugbo, ndị ọrụ chelating, na nri anụmanụ. HCN bụ mmiri mmiri na-egbu egbu nke ukwuu nke na-esi na 26 degrees C., yana dịka nke a, edobere iwu nkwakọ ngwaahịa na usoro njem. Na ngwa ụfọdụ, achọrọ HCN n'ebe dịpụrụ adịpụ nke dị anya site na nnukwu ụlọ ọrụ HCN. Mbupu nke HCN gaa n'ọnọdụ ndị ahụ gụnyere nnukwu nsogbu. Mmepụta nke HCN na saịtị a ga-eji ya ga-ezere ihe egwu dị na njem ya, nchekwa ya na njikwa ya. Ngosiputa onodu uzo nke HCN, site na iji usoro ihe eji eme ihe, agaghi enwe ike inweta aku na uba. Agbanyeghị, obere ọnụ ọgụgụ, yana nnukwu ọnụọgụ, mmepụta saịtị saịtị nke HCN nwere ike iji usoro na ngwa ngwa mepụtara na teknụzụ na akụnụba.
Enwere ike ịmepụta HCN mgbe a chịkọtara ogige ndị nwere hydrogen, nitrogen, na carbon na nnukwu okpomọkụ, ma ọ bụ na-enweghị ihe mmeghe. Dịka ọmụmaatụ, HCN na-ahụkarị site na mmeghachi omume nke amonia na hydrocarbon, mmeghachi omume nke na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Usoro azụmahịa atọ maka ịme HCN bụ Blausaure aus Methan und Ammoniak (BMA), Andrussow, na usoro Shawinigan. Enwere ike ịkọwapụta usoro ndị a site na usoro nke ikpo ọkụ na ịnyefe, yana ma ọ bụ na a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
Usoro Andrussow na-eji okpomọkụ sitere na combustion nke gas hydrocarbon na oxygen n'ime olu nrụpụta iji nye okpomọkụ nke mmeghachi omume. Usoro BMA na-eji okpomoku nke usoro oku na-esi na mpụga eme ihe iji kpoo ihu elu nke mgbidi ahụ, nke na-eme ka ikuku dị n'ime mgbidi ahụ rụọ ọrụ ma si otú a na-enye okpomọkụ nke mmeghachi omume. Usoro Shawinigan na-eji ọkụ eletrik na-aga site na electrodes na bed fluidized iji nye okpomọkụ nke mmeghachi omume.
N'ime usoro Andrussow, ngwakọta nke gas nkịtị (ngwakọta hydrocarbon gas dị elu na methane), amonia, na oxygen ma ọ bụ ikuku na-emeghachi omume n'ihu ọnụnọ nke platinum catalyst. Ihe nnochi ndi mmadu bu otutu uzo nke platinum / rhodium waya gauze. Ọnụọgụ nke ikuku oxygen bụ nke na combustion nke akụkụ nke ndị na-eme ihe na-enye ike zuru oke iji mee ka ndị na-eme ihe na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ karịa 1000 Celsius C. yana ọkụ ọkụ chọrọ maka mmeghachi omume HCN. Mmeghachi omume na ngwaahịa bụ HCN, H2, H2O, CO, CO2, na Chọpụta ichekwa elu nke nitrites, nke a ga-ahụ iche.
Na usoro BMA, ngwakọta nke amonia na methane na-asọba n'ime akpa seramiiki ndị na-abụghị nke nwere ihe ọkụkụ dị elu. A na-edozi ma ọ bụ kpuchie akụkụ nke ọ bụla n'ime tube ọ bụla. A na-etinye ọkpọkọ n'ime ọkụ ọkụ dị elu ma na-ekpo ọkụ n'èzí. A na-eduzi okpomọkụ ahụ site na mgbidi seramiiki gaa na ntanetị, nke bụ akụkụ dị mkpa nke mgbidi ahụ. A na-emeghachi omume ahụ na 1300 Celsius C. dị ka ndị na-emeghachi omume kpọtụrụ ndị na-akpali akpali. Mgbanwe okpomọkụ a chọrọ dị elu n'ihi ọnọdụ mmeghachi omume dị elu, nnukwu okpomọkụ nke mmeghachi omume, na eziokwu ahụ bụ na coking nke ihe mmegharị ahụ nwere ike ime n'okpuru ọnọdụ mmeghachi omume, nke na-egbochi mmegharị ahụ. Ebe ọ bụ na ọkpọkọ ọ bụla dị ihe dị ka 1 ″ na dayameta, a chọrọ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke tubes iji mezuo mmepụta mmepụta. Mmeghachi omume na ngwaahịa bụ HCN na hydrogen.
Na usoro Shawinigan, ike achọrọ maka mmeghachi omume nke ngwakọta nke propane na amonia na-enye site na eletriki dị ugbu a na-asọpụta n'etiti electrodes mikpuru n'ime akwa mmiri na-enweghị mmiri nke ihe na-abụghị catalytic coke. Enweghi ihe mmeghe, yana enweghị ikuku oxygen ma ọ bụ ikuku, na usoro Shawinigan pụtara na mmeghachi omume ga-agba ọsọ na oke okpomọkụ, nke kachasị karịa 1500 degrees C. Ọnọdụ dị elu dị mkpa chọrọ nnukwu nsogbu ihe owuwu maka usoro.
Ọ bụ ezie na, dị ka ekpughere n'elu, a maara na enwere ike ịmepụta HCN site na mmeghachi omume nke NH3 na gas hydrocarbon, dị ka CH4 ma ọ bụ C3H8, na ọnụnọ nke Pt catalyst catalyst, a ka nwere mkpa iji melite arụmọrụ nke usoro dị otú a, na ndị metụtara ya, iji melite akụnụba nke mmepụta HCN, ọkachasị maka obere mmepụta. Ọ dị mkpa kachasị mkpa iji belata ike ojiji yana ammonia ihe ọhụụ ma na-eme ka ọnụ ọgụgụ mmepụta HCN dị elu ma e jiri ya tụnyere ọnụọgụ nke ngwa ahịa dị oke ọnụ ahịa ejiri. Ọzọkwa, ihe mmegharị ahụ ekwesịghị imetụta mmepụta nke HCN site na ịkwalite mmeghachi omume na-adịghị mma dịka coking. Ọzọkwa, achọrọ ya iji melite ọrụ na ndụ nke ndị eji eme ihe na usoro a. N'ụzọ dị oke mkpa, nnukwu akụkụ nke itinye ego na mmepụta nke HCN nọ na ngwakọta ndị platinum. Nchọpụta nke ugbu a na-eme ka ihe mmegharị ahụ dị ọkụ, kama n'ụzọ na-enweghị isi dịka ọ dị na nka gara aga, wee si otú a mezuo desiderata ndị a.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, a na-amata ọkụ ọkụ na-eme ka ọ dịkwuo ala iji nye ezigbo ịdị n'otu nke nnyefe ọkụ na ike dị elu na ihe ndị nwere ụzọ nnweta eletriki dị ogologo. Mgbe ị na-enye ike mmeghachi omume na ikuku gas nke na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ọ ga-adị mkpa ka a kpoo ọkụ ozugbo na ihe na-akpata ume ọkụ. Ihe ndi choro nke edo edo na oru oma nke oma na ebe di elu, ihe na-eme ka ikuku gas na-emegide ikike nke itinye oku. Ihe mepụtara ugbu a sitere na nsonaazụ a na-atụghị anya ya nke enwetara na nhazi ngosi nke ebe ihe mmeputa ahụ nwere ụdị nhazi ọhụụ. Structdị nhazi a jikọtara atụmatụ nke: 1) ụzọ ogologo ụzọ eletriki nke na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-eme ka nrụpụta ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, na 2) onye na-eme ihe nwere mpaghara dị elu; njirimara ndị a na-emekọ ihe ọnụ iji kwado mmeghachi omume kemịkal. Enweghi igwe zuru oke n'ime ụlọ mmeghachi omume na-eme ka mmepụta nke HCN na-eme ka mmezi nke HCN na-eme site na mmeghachi omume nke NH3 na gas hydrocarbon.
Ngwunye ihe na-ekpo ọkụ ọkụ
chemical reactors kpo oku
Inductionor Igwe oku